पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि लक्षण देखिए 'लङ कोभिड' हुन सक्छ
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यपिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि लक्षण देखिए ‘लङ कोभिड’ हुन सक्छ
आइतबार, २३ जेठ, २०७८ 0प्रतिक्रिया
अधिकांश मानिस कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको तीन महिनासम्म पनि थकान, ज्वरो, टाउको दुखाइ र गन्ध नआउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सबैभन्दा बढी गुनासो शारीरिक थकानकै छ । कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि हुने तनावले पनि मानिसलाई दिमागी बिरामी बनाइरहेको छ ।
यसैकारण विज्ञहरूले पनि यस विषयमा विशेष ध्यान दिन सुरु गरेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण र यसका लक्षण सकिइसकेपछि पनि मानिसमा यस्तो चिन्ता किन हट्न सकिरहेको छैन ? यस्ता लक्षण कति दिनसम्म रहन्छन् ? यस विषयमा अहिले विज्ञहरूले अध्ययन थालेका छन् ।
काठमाडौँको कपन घर भएकी एलिना गौतम दुई महिनाअघि कोरोना सङ्क्रमित भएकी थिइन् । उनी अहिले कारोनामुक्त भइसकेकी छिन् ।
तर, उनलाई शारीरिक थकान भने निको भएको छैन । ‘काम गर्न पटक्कै जाँगर लाग्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘जिउ सबै गलेको जस्तो महसुस भइरहन्छ ।’
भक्तपुर बस्ने सुस्मिता राना मगरलाई पनि एक महिनाअघि कोरोना सङ्क्रमण भएको थियो ।सङ्क्रमण भएको १५ दिनपछि पुनः परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आयो ।
तर, रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि उनलाई झाडाबान्ता हुने, टाउको दुख्ने समस्या अहिलेसम्म भइरहेको बताउँछिन् ।
‘अझै खानाको स्वाद राम्ररी पाएकी छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘जिउ पनि फुर्तिलो भएको छैन । केही काम गर्न जाँगर पनि लाग्दैन । आँखा पोलिरहन्छ, बेलाबेलामा एकदमै टाउको पनि दुख्छ ।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार अहिले कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएकाहरू, विशेष गरेर युवा समूह, एकदमै थकाइ लाग्ने, भर्‍याङ उक्लिन नसक्ने, आफ्नो शरीर आफैँलाई भारी भएजस्तो हुने, मुटु धकधक गरेजस्तो हुनेलगायत समस्या लिएर आउने गरेका छन् ।
उनका अनुसार कोरोना सङ्क्रमण देखिएको दुईदेखि तीन हप्तामा सङ्क्रमणमुक्त हुनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसपछि पनि नियमित लक्षण देखिइरहन्छ भने त्यसलाई लङ कोभिड भनिन्छ ।
लङ कोभिड शरीरमा लामो समयसम्म रहन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । विकसित देशहरूमा कोरोना सङ्क्रमण भएर निको भएका १० प्रतिशतमा लङ कोभिडको समस्या देखिइरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार केही सङ्क्रमणमुक्त भएका व्यक्तिमा मानसिक समस्या पनि देखिने गरेको पाइएको छ ।
कोभिड सङ्क्रमण भएको १० देखि १५ दिनमा पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि कोभिडको लक्षण अझै केही हप्ता वा महिनासम्म रहिरहन्छ । अर्थात् शरीरबाट भाइरस निस्किए पनि त्यसको लक्षण निस्किएको हुँदैन ।
केही लक्षण रहिरहन्छन् भने केही दिनमा फेरि लक्षण देखिनुलाई लङ कोभिड भनिएको छ । अधिकांश सङ्क्रमितमा रिपोर्ट नेगेटिभ आउनुलाई माइक्रोबायोलोजिकल रुपमा शरीर रिकभर भनिने गरेको डा. पुन बताउँछन् ।
यसै आधारमा लङ कोभिड शरीरमा भाइरस देखिएको समयदेखि लक्षण नष्ट हुन लाग्ने समयअवधिलाई भन्न सकिने उनको भनाइ छ ।
कस्तो लक्षण देखिँदा लङ कोभिड भन्ने ?
डा. पुनका अनुसार मुटुको धड्कन रोकिए जस्तो हुने, ज्यान भारी भए जस्तो अनुभव हुने, ज्वरो आउने, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने, छाती दुख्ने, थकान महसुस हुने, लामो समयसम्म जोर्नीहरूको दुखाइ भइरहने र विशेष गरेर युवाहरूलाई निद्रा नलाग्ने र छटपटाहट हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् ।
रगतमा अक्सिजनको मात्रा घटिरहने र कतिपयको ब्रेन स्ट्रोक भएर मृत्यु पनि हुन सक्ने डा. पुनले बताए ।
लङ कोभिडका दुई स्टेज हुने डा. पुन बताउँछन् । ‘एउटा पोस्ट एक्युट कोभिड र अर्को क्रोनिक स्टेज,’ उनी भन्छन्, ‘यसले दिमागदेखि मुटुसम्मको समस्या हुनसक्छ ।’
नेपालमा के छ लङ कोभिडको अवस्था ?
नेपालमा लङ कोभिडको समस्या धेरैमा देखिएको डा. पुन बताउँछन् । ‘नेपालमा पनि यस्ता धेरै केस देखेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले यसको समस्या धेरै युवावर्गमा देखिएको छ । वृद्धहरूमा पनि समस्या छ । तर, उहाँहरू अस्पताल नआउनुभएको पनि हुन सक्छ ।’
कस्तालाई हुन्छ लङ कोभिड ?
लङ कोभिड सबै किसिमका बिरामीलाई हुनसक्ने डा. पुन बताउँछन् । उनका अनुसार यो हल्का, मध्यम र गम्भीर लक्षण भएका सङ्क्रमित सबैलाई हुन सक्छ । तर अधिकांश केस भने गम्भीर लक्षण भएका सङ्क्रमितमा देखिएको छ ।
कोरोनाबाट निको भएका व्यक्तिहरूलाई एक वर्षसम्म राम्रो हेरचाह गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसपछि मात्रै सङ्क्रमणमुक्त भएका व्यक्तिहरू पूर्ण रुपमा स्वस्थ भइसकेका छन् भन्नेबारे ढुक्क बन्नुपर्ने उनको मान्यता छ ।
कोरोना भाइरसले शरीरका धेरै अङ्गमा प्रभाव पार्ने भएको हुँदा डा. पुनका अनुसार जसलाई जस्तो स्वास्थ्य समस्या आउँछ, उसले त्यही समस्याबारे सम्बन्धित डाक्टरहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ ।
‘आफ्नो आत्मबल बढाउने र सकारात्मक सोच बनाइराख्ने गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सङ्क्रमणमुक्त भएपछि लक्षणहरू देखिए परीक्षण गराउने र डाक्टरको सल्लाह लिने, आफ्नो शरीरले सकेजति व्यायाम गर्ने, तागतिलो खानेकुरामा विशेष ध्यान दिने, निद्रा नलाग्ने अवस्थामा योगा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
नेगेटिभ लक्षण लङ काेभिड